by McKenna Miller က
Canisius ကောလိပ်သင်္ကေတပြ။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
Canisius ကောလိပ် 1870 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးယခုအခါဒေသတွင်းထိပ်တန်းပုဂ္ဂလိကဂျပန်သို့ကောလိပ်များတစ်ခုဖြစ်သည်ခဲ့သည်။ နယူးယောက်ကောလိပ်ကျောင်း Buffalo အတွက် 72 ဧကပေါ်တွင်တည်ရှိသည်နှင့်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကို 70 ပညာသင်နှစ်အစီအစဉ်များကိုကျော်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Canisius သည်၎င်း၏ 11 1 မှကျောင်းသား / ဒြေအချိုးအစားနှင့်အတူကျောင်းသားအပြန်အလှန်တန်ဖိုးထားသည်။ အဆိုပါကောလိပ်ရဲ့ 56 အဆောက်အအုံများ NCAA ရတိုင်းကျွန်မအားကစားအသင်းများအဘို့ထိပ်တန်းထစ်ပညာရှင်တွေထံမှကျောင်းသားလေ့လာမှုနှင့်အပန်းဖြေစင်တာများမှအဆောက်အဦမှအရာအားလုံးကိုအမျိုးမျိုး။
Canisius ကောလိပ်မှာ Montante ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ
Canisius ကောလိပ်မှာ Montante ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
တစ်ဦး Canisius ကောလိပ် Chorale, Concert Band, ကုန်သည်ကြီးများအသင်းသံစုံတီးဝိုင်း, ဂျက်ဇ်ဂီတ Ensemble, ဒါမှမဟုတ် ArtsCanisius စွမ်းဆောင်မှုကိုမြင်လျှင်စိတ်ဝင်စားမည်သူမဆိုအဆိုပါ Montante ယဉ်ကျေးမှုစင်တာထုတ်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါစွယ်စုံအဆောက်အဦကိုလည်းပို့ချချက်, စပီကာများနှင့်အခါအားလျော်စွာ Buffalo တီးဝိုင်းသံစုံတီးဝိုင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ Montante ယဉ်ကျေးမှုစင်တာက၎င်း၏အပြည့်အဝ staffed ထိန်းချုပ်မှုတဲ, box Office ရဲ, greenroom တော်တော်များများနှင့်ဧည့်ခံဒေသများနှင့်အတူ, ဂီတနှင့်ပြဇာတ်ရုံကျောင်းသားများအတွက်အိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။
Canisius ကောလိပ်မှာဟောငျးပင်မ။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
Canisius ရဲ့ဟောငျးပင်မများအတွက်ဆောက်လုပ်ရေး 1911 ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်မယ့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်, အဆောက်အဦးက၎င်း၏က 100 ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ကျင်းပဆိုလိုတာက, 1912 ခုနှစ်တွင်ပြီးဆုံး။ ဟောငျးပင်မနေဆဲအများအပြားကို up-to-date ဖြစ်အောင်စာသင်ခန်းအပါအဝင်မြောက်မြားစွာအရေးကြီးသောကျောင်းဝင်းအဆောက်အဦ, ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာနေအိမ်တစ်ဦးအမှုလေ့လာမှုဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် PC ကိုဓာတ်ခွဲခန်းအဖြစ်ကျောင်းသားဘဏ္ဍာရေးအကူအညီများနှင့်ကျောင်းပရဝုဏ်န်ကြီးဌာနရုံး၏ရုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများကိုနေဆဲကြမ်းတမ်းသောရာသီဥတုရှိနေသော်လည်းန်းကျင်ရနိုင်ဒါဟောငျးပင်မ, မြေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ကွန်ယက်မှတဆင့် Dungan ခန်းမ, Bouwhuis စာကြည့်တိုက်များနှင့်လမ်းဘေးထွက်Caféမှချိတ်ဆက်နေသည်။
Canisius ကောလိပ်မှာ Palisano Pavilion
Canisius ကောလိပ်မှာ Palisano Pavilion ။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
အဆိုပါ Palisano Pavilion ကျောင်းသားများကိုပျော်စရာအနားယူနှင့်ရှိသည်ဖို့ရာအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသည့်စနစ်ဒါမှမဟုတ် Bart Mitchell က Quad မှတဆင့်ရှိရနိုင်, နှင့်တဲအပန်းဖြေဒေသများ၏တစ်အိမ်ရှင်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Penfold Commons ကျောင်းသားများကိုအစီအစဉ်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုများအတွက်ကြိုတင်ယူထားနိုငျသော Multi-ရည်ရွယ်ချက်အခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုံအတွင်းပိုင်းရေကူးကန်စားပွဲ, foosball, ping ရဲ့ Pong နှင့်ပူဖောင်းဟော်ကီတပ်ဆင်ထားရသောဂိမ်းအခန်းဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားငှားရမ်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါသည်နှင့်လစဉ် ping ရဲ့ Pong နှင့်ဘိလိယက်ပြိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ Iggy ရဲ့နှင့်လမ်းဘေးထွက်Café & အိတ္စပရပ္ဘား: အဆိုပါ Palisano Pavilion လည်းနှစ်ခုထမင်းစားခန်းရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
Canisius ကောလိပ်မှာရစ်ချတ်အီးဆောင်းရာသီ '42 ကျောင်းသားရေးစင်တာ
Canisius ကောလိပ်မှာရစ်ချတ်အီးဆောင်းရာသီ '42 ကျောင်းသားရေးစင်တာ။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
ကျောင်းဝင်းအဆောက်အဦများနှင့်အပန်းဖြေဒေသများ၏တစ်ဦးကကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်ရစ်ချတ်အီးဆောင်းရာသီ '42 ကျောင်းသားရေးစင်တာ၌တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာစာအုပ်တိုက်နဲ့တူကျောင်းသားသာယာအဆင်ပြေမှုများ, ခရီးသွားလက်မှတ် Lounge နှင့်စီးပွားရေးလေးအတွက်အသင့်တော်ခန်းမရှိပါတယ်။ ဒါဟာထိုကဲ့သို့သော Grupp Fireside Lounge, 2nd Floor Lounge, ညီလာခံခန်း, အလုပ်အမှုဆောင်ညီလာခံခန်းနှင့် Regis အခန်းအဖြစ်နေရာများတွေ့ဆုံများနှင့်ကွန်ဖရသိရသည်။ နောက်ဆုံးတော့ကျောင်းသားစင်တာကိုလည်းဌာနလေးအတွက်အသင့်တော်ခန်းနှင့်ကျောင်းပရဝုဏ် Programming & ခေါင်းဆောင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
Canisius ကောလိပ်မှာသိပ္ပံခန်းမ။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
Canisius ရဲ့သိပ္ပံခန်းမအားလုံးတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ၏ 30 ရာခိုင်နှုန်းကိုတက်စေသည်သောကောလိပ်ကျောင်းရဲ့ကြီးမား science major ကလူဦးရေရန်ကု သ. မရသော။ အဆိုပါအဆောက်အဦးတခု $ 68 သန်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတကြီးနှင့်၎င်း၏အပြန်အလှန် "သိပ္ပံ-on-Display ကို" ဒေသများ, State-Of-The-Art စာသင်ခန်းများနှင့်ဓါတ်ခွဲခန်းနှင့်အတူထိုက်တန်နှင့်ဘုံဧရိယာနှင့်အတူတစ်ဦးကဖီးပြသထားတယ်။ လှပတဲ့သိပ္ပံခန်းမကိုလည်း Buffalo နိုင်အာဂရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းပရဝုဏ်နှင့်အတူကောလိပ်ကျောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကူညီဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Canisius ကောလိပ်မှာ Wehle နည်းပညာရေးစင်တာ
Canisius ကောလိပ်မှာ Wehle နည်းပညာရေးစင်တာ။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
အဆိုပါ Wehle နည်းပညာ Center က Canisius ရဲ့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအစီအစဉ်နှင့်ကျောင်းဝင်းအပေါ်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့နည်းပညာအချို့မှမူလနေရာဖြစ်သည်။ ဒါဟာ microcomputer ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်စက်ရုပ်ဓာတ်ခွဲခန်းအပါအဝင်အများအပြားဓါတ်ခွဲခန်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများ၏အချို့တစ်စပျစ်သီးပြွတ်ကွန်ပျူတာသုံးဖက်မြင်ပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြရန်နိုငျကွောငျး 24 ပရိုဆက်ဆာနှင့် Immersadesk ကိုခေါ်တစ်ခုခုလည်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါစက်ရုပ်ဓာတ်ခွဲခန်းအဆိုပါ Lego Mindstorms နှင့်အတူစတင်စက်ရုပ်သုံးမျိုးမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ ထိုအခါက Evolution စက်ရုပ် ER-1 စက်ရုပ်ရှိပါတယ်, နှင့်နောက်ဆုံးယင်းဓာတ်ခွဲခန်းခြောက်လကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသော Sony က AIBO စက်ရုပ်ခွေးရှိပါတယ်။
Canisius ကောလိပ်မှာကနျြးမာရေးသိပ္ပံအဆောက်အအုံ။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
Canisius ရဲ့ကနျြးမာရေးသိပ္ပံအဆောက်အအုံကောလိပ်ရဲ့ဘွဲ့ကျောင်းသားအများအပြားနေရာဖြစ်သည်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရောက်အရွယ်မရောက်သေးသူ၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတ်ခွဲခန်းသိပ္ပံ, ဇီဝဗေဒ, ကျန်းမာရေးနှင့်ကောင်းစွာအတွက်အဓိကနှင့်ထို့ထက် ပို. နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ grad အစီအစဉ်များကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ, ကျန်းမာရေးနှင့်လူ့စွမ်းဆောင်ရည်, အသက်ရှုလမ်းကြောင်းစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးချအာဟာရ, ရပ်ရွာများနှင့်ကျောင်းကျန်းမာရေးပါဝင်သည်။ တောင်မှအကွာအဝေး-သင်ယူခြင်းကျောင်းသားများကိုကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအတွက်သိပ္ပံ၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းမာစတာနှင့်အတူ, Canisus '' ကျန်းမာရေးသိပ္ပံအစီအစဉ်မှအကြိုးခံစားနိုင်ပါတယ်။
Canisius ကောလိပ်မှာ Horan O'Donnell သိပ္ပံအဆောက်အအုံ
Canisius ကောလိပ်မှာ Horan O'Donnell သိပ္ပံအဆောက်အအုံ။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
အဆိုပါ Horan O'Donnell သိပ္ပံအဆောက်အအုံ 1940 ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် Canisius ရဲ့သိပ္ပံအစီအစဉ်များကိုများစွာသောအဘို့အစာသင်ခန်းရရှိထားသူခဲ့သည်။ အဆိုပါကောလိပ်သိပ္ပံ-related ဘွဲ့ရနှင့်ဘွဲ့ကြိုအတန်းများဟာ host ကမ်းလှမ်းပေမယ့်လူကြိုက်အများဆုံး science major ကစိတ်ပညာနှင့်ဇီဝဗေဒဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ O'Donnell အဆောက်အဦဓာတုဗေဒနှင့်ဇီဝဓါတုဗေဒဌာနအဖြစ်တစ်ခု Ion Chromatograph တစ် Tunable Pulse ဆိုးဆေးလေဆာနှင့်တစ်ဦး Differential Scanning ကို Calorimeter အပါအဝင်အချို့သောအထင်ကြီးပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်။
Canisius ကောလိပ်မှာ Koessler အားကစားစင်တာမှ
Canisius ကောလိပ်မှာ Koessler အားကစားစင်တာကို။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
Canisius ရဲ့အားကစားအစီအစဉ်၏နောက်ထပ်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်း Koessler အားကစားစင်တာ (KAC) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနအဖြစ်ကျောင်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားများ, ဖျော်ဖြေပွဲနှင့်ရှိုးပွဲရတာဟာ။ အဆိုပါ $3သန်းစက်ရုံတစ်ရေကူးကန်, အလေးချိန်အခန်းယင်းပါတီနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဓိကအင်္ဂါရပ် Multi-ရည်ရွယ်ချက်အားကစားရုံပါပဲ။ ဒါကဘတ်စကက်ဘောအသင်းနေရာဖြစ်သည်တရားရုံးဖြစ်ပြီး, 2002 ခုနှစ်ကဂိမ်းရုပ်မြင်သံကြားကနေနိုင်ဒါအသစ်အ bleachers, အလင်းအိမ်နှင့်ဝါယာကြိုးထည့်အသစ်တစ်ခု scoreboard မှပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်။
Canisius ကောလိပ်မှာ Loyola ခန်းမ
Canisius ကောလိပ်မှာ Loyola ခန်းမ။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
Loyola ခန်းမ 1949 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့, ပြီးတော့ကတည်းကကြောင့် Canisius မှာဂျပန်သို့အသိုင်းအဝိုင်းသျောသိရသည်။ တစ်ဦးနေထိုင်ရာအဆောက်အဦးဖြစ်ခြင်းအပြင်, Loyola ခန်းမရံဖန်ရံခါထိုကဲ့သို့သောကျေးဇူးတုံ့ပြန် Mass အဖြစ်ဖြစ်ရပ်များ, အိမ်ရှင်အဖြစ်။ Canisius ကိုလည်းခန်းမများ၏ဒေသခံများက၎င်းတို့၏နေအိမ်မြင်ကော်ဖီများကိုကျောင်းသားများကိုဖိတ်ခေါ်ရှိရာဂျပန်သို့အဖြစ်အပျက်နှင့်အတူဂျာဗားအပါအဝင်ကျောင်းသားများအတွက်အထူးခရီးစဉ်, ကမ်းလှမ်း နှင့်ရေခဲမုန့်။
Canisius ကောလိပ်မှာလီယွန်ခန်းမ။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
လီယွန်ခန်းမအများအပြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကျောင်းဝင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ ဒါဟာစာသင်ခန်း, Mac အတွက်လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းနှင့်တစ်ဦးအမှုလေ့လာမှုအခန်းတစ်ခန်းအဖြစ်မကြာခဏအစည်းအဝေးများ, ပို့ချချက်များနှင့်ကြိုဆိုဧည့်အတှကျအသုံးပွုသောလီယွန်ခန်းမညီလာခံ ROOM တွင်ရရှိထားပါသည်။ လီယွန်လည်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုကမ်းလှမ်းသော Canisius ကောလိပ်မီဒီယာစင်တာ, ၏နေအိမ်, ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု, Multi-မီဒီယာန်ဆောင်မှုများနှင့်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့်အတူတိုင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Canisius ငလျင်မှတ်စက်စက်မြေပြင်အောက်မှာအဆောက်အဦးနှင့် 11 ခွကေိုနောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါတယ်တည်ရှိသည်။
Canisius ကောလိပ်မှာ Bagen ခန်းမ
Canisius ကောလိပ်မှာ Bagen ခန်းမ။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
Bagen ခန်းမတက္ကသိုလ်နယ်မြေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကိုရတာဟာ။ ဒါဟာကျောင်းသားမှတ်တမ်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ရုံး, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်, ထိုတွဲဘက်ဌာနမှူးရုံးနှင့်ကျောင်းသားအကြံပေးများ၏ရုံး၏ဦးစီးဌာနရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအစညီလာခံအတှကျအသုံးပွုနှင့်တစ်ဦး 50 "LCD ကို panel ကိုလေးကွန်ပျူတာများများအတွက်ဆက်သွယ်မှု, အသံ conferencing စနစ်, ကို web ကင်မရာနှင့်တစ်ဦး SMART ဘုတ်အဖွဲ့ Interactive မှ Whiteboard တပ်ဆင်ထားသောနည်းပညာမြင့်ကသမ္မတရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ ROOM တွင်ရှိသည်။
Canisius ကောလိပ်မှာအင်ဒရူးအယ်လ် Bouwhuis စာကြည့်တိုက်
Canisius ကောလိပ်မှာအင်ဒရူးအယ်လ် Bouwhuis စာကြည့်တိုက်။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
အဆိုပါအင်ဒရူးအယ်လ် Bouwhuis စာကြည့်တိုက် Canisius စာအုပ်များနှင့်အတူကျောင်းသားများ, ရုပ်ရှင်များ, နှင့်အခြားရည်ညွှန်းပစ္စည်းအဖြစ် Inter-စာကြည့်တိုက်ချေးငွေစနစ်ကတဆင့်အွန်လိုင်းဒေတာဘေ့စနဲ့ off-ကျောင်းဝင်းစာအုပ်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင်စာကြည့်တိုက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, ရည်ညွှန်းစာကြည့်တိုက်များနှင့်တစ်ဦးဘာသာပေါင်းစုံဆုတောင်းပဌနာအခန်းထဲမှာအပါအဝင်များစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုများရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားများကိုလည်းအလုပ်သို့မဟုတ်လေ့လာမှုများအတွက်စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုမှုသာလျှင်ချေးငွေများများအတွက်လက်ပ်တော့များနှင့်အရံခန်းချေးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါစာကြည့်တိုက်စာတမ်းများပြီးဆုံးရန်နှောင်းပိုင်းတွင်တက်နေဖို့သူကိုကြောငျးသားမြားအတှကျ 2:00 pm တွင်သည်အထိအများဆုံးကျောင်းကရက်ပေါင်းပွင့်လင်းသည်။
Canisius ကောလိပ်မှာကျေးရွာမြို့တွင်းစုပေါင်း။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
upperclassman များအတွက်တစ်ခုမှာနေထိုင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုတိုက်ခန်း-စတိုင်ရှုပ်ထွေးအတွက်ကျောင်းဝင်း၏ကျန်ကနေလမ်းတစ်လျှောက်တွင်တည်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားလေးငါး-လူတစ်ဦးအစုံ၏ဖွင့်ထားကြပါတယ်ရသောကျေးရွာမြို့တွင်းစုပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါမြို့တွင်းစုပေါင်းတဦးတည်းပုဂ္ဂလိကရေချိုးခန်း feature နှစ်ခုအိပ်ခန်းတိုက်ခန်းများ, နှစ်ယောက်ပုဂ္ဂလိကရေချိုးခန်းရှိသည်သောသုံးအိပ်ခန်းတိုက်ခန်းများသို့တက်ခွဲခြားထားတယ်။ အဆိုပါကျေးရွာမြို့တွင်းစုပေါင်းကွန်ပျူတာအခန်းတစ်ခန်း, မီးဖိုချောင်, ရေချိုးခန်းအခန်းတစ်ခန်းနှင့်တီဗွီ Lounge နှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အသိုင်းအဝိုင်းအလယ်ဗဟိုရှိသည်။
Canisius ကောလိပ်မှာမြို့တွင်းစုပေါင်းဝင်း။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
အဆိုပါကျေးရွာမြို့တွင်းစုပေါင်းလည်းသစ်ပင်များနှင့်မြက်၏သေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထား patch ကိုတပ်ဆင်ထားသည့်ပုဂ္ဂလိကဝင်းရှိသည်။ ဒါကအများကြီး Canisius ကျောင်းသားများကိုအိမ်ပြင်အသုံးစရိတ်အချိန်ပျော်မွေ့ပုံကိုထင်ဟပ်နှင့်ကဲ့သို့သောမှရွေးချယ်ဖို့အများကြီးအားကစားလှုပ်ရှားမှုများရှိပါတယ်။ အဆိုပါကောလိပ်ဘောလုံး, ရပ်ဂ်ဘီ, နှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းကနေခြံစည်းရိုး, ဘိုးလင်းနှင့်မြင်းစီးအထိကလပ်အားကစားပေးထားပါတယ်။ သူတို့ကအစကံ-Jam, dodgeball အပါအဝင် intramurals, နှင့်ကြမ်းပြင်ဟော်ကီစပွန်ဆာ။ အဆိုပါမြို့တွင်းစုပေါင်းတန်တိုင်းပဲအပြင်မှာတချို့အချိန်ဖြုန်းဖို့အားကစားလေ့ကျင့်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောသောနေရာများ, ဒါပေမယ့်လည်းကောင်းတဲ့အစက်အပြောက်ဖြစ်ကြသည်။
Canisius ကောလိပ်မှာဘုရင် Chapel ခရစ်တော်သည်
Canisius ကောလိပ်မှာဘုရင် Chapel ခရစ်တော်သည်။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
ကျောင်းဝင်းအပေါ်ဗိသုကာ၏အလှဆုံးနှင့်အထင်ကရအပိုင်းပိုင်းတစ်ခုမှာခရစ်တော်တည်းဟူသောဘုရင် Chapel ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဆောက်အဦး 1951 ခုနှစ်တွင်ပြီးဆုံးခဲ့သည်ကို၎င်း, Chapel နေဆဲအများအပြား Canisius ကျောင်းသားများကယနေ့အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာနီးပါးလူ 500 ဆံ့နှင့်ဆိတ်ကွယ်ရာအစုလိုက်အပြုံလိုက် မှစ. , Chapel မကြာခဏဗတ္တိဇံ, အောက်မေ့ဖွယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်မင်္ဂလာဆောင်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒေသခံများနှင့် Canisius ကျောင်းသားဟောင်းများနှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုမှုအတွက်ခရစ်တော်အားဘုရင် Chapel စာအုပ်ဆိုင်ရန်အဘို့အဒါဟာဘုံဖြစ်ပါတယ်။
Canisius ကောလိပ်မှာ Churchill ၏ပညာရေးဆိုင်ရာမျှော်စင်
Canisius ကောလိပ်မှာ Churchill ၏ပညာရေးဆိုင်ရာမျှော်စင်။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
အဆိုပါ Churchill ၏ပညာရေးဆိုင်ရာမျှော်စင်ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာများအတွက်အများအပြားအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာပရိုဂျက်, စာရွက်စာတမ်းကင်မရာများနှင့် SMART ပျဉ်ပြားနှင့် State-Of-The-Art စာသင်ခန်းတပ်ဆင်ထားသည်။ ဒါဟာအစအများအပြားအင်ျဂလိဌာနများအတွက်ရုံးခန်းအဖြစ်စပွန်ဆာပေးထား Programs ကိုရုံးရတာဟာ။ Churchill ၏ပညာရေးဆိုင်ရာမျှော်စင်၏မြေအောက်ခန်းတွင်, သငျသညျအပြေးအပေါငျးတို့သဒြေရဲ့ကွန်ပျူတာများကိုစောင့်ရှောက်ရန်၎င်း၏နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာကွန်ပျူတာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်သောတကယ်တော့စင်တာ (ဌာန Technology Services က), တွေ့လိမ့်မည်။
Canisius ကောလိပ်မှာ Demske အားကစား Complex
Canisius ကောလိပ်မှာ Demske အားကစား Complex ။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
အဆိုပါ Canisius ရွှေ Griffin ဟာ NCAA ရတိုင်းကျွန်မအဆင့်မှာအများအပြားအားကစားနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်။ သူတို့က Metro အတ္တလန္တိတ်အားကစားညီလာခံနှင့်အတ္တလန္တိတ်ဟော်ကီညီလာခံအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ၎င်းတို့၏အဆောက်အဦဟာသူတို့ရဲ့အားကစားစွမ်းရည်ကိုထင်ဟပ်။ အဆိုပါဗျာဂျိမ်းအမ် Demske အားကစား Complex အဆိုပါ Canisius ဘေ့စ်ဘော, softball, ဟော်နှင့်ဘောလုံးအသင်းများအဘို့ 1989 ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ $ 4.5 သန်းရှုပ်ထွေး 1000 ဘို့ All-ရာသီဥတု A-မြက်ခင်းပြင်များနှင့်အထူးတန်းထိုင်ခုံပါတယ်။ Canisius လည်းရေကူးကန်, ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာ, Multi-ရည်ရွယ်ချက်အားကစားရုံများနှင့်ထို့ထက် ပို. များနှင့်နာမည်ကြီး HARBORCENTER ရေခဲပြင်ကိတ်ကွင်းရှိပြီးသော Koessler အားကစားစင်တာ, အပါအဝင်အခြားအားကစားအဆောက်အဦ, ရှိပါတယ်။
Canisius ကောလိပ်မှာ Dugan ခန်းမ
Canisius ကောလိပ်မှာ Dugan ခန်းမ။ ဓာတ်ပုံ Credit: မိုက်ကယ် Macdonald
Dugan ခန်းမပထမဦးဆုံးနှစ်နှင့် sophomore ကျောင်းသားများအတွက်တစ်ဦးနေထိုင်ရာခန်းမဖြစ်ပါတယ်။ လေး-လူတစ်ဦးအစုံအတွက် 270 ကျောင်းသားများ, ဘုံဧည့်ခန်းသို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းနှင့်အတူအသီးအသီးတဝိုက်ခုနစျပါး-ကြမ်းပြင်အဆောက်အဦအိမ်ခြေ။ ဒါဟာအစ full-size ရေခဲသေတ္တာ, မီးဖို, မီးဖိုနှင့်မိုက်ခရိုဝေ့အပါအဝင်မီးဖိုချောင်နှင့်အတူတိုင်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာနားနေခန်းရှိပါတယ်။ Dugan ကိုလည်းဗဟိုလေအေးပေးစက်, ရေချိုးခန်းန်ဆောင်မှုများ, ကြိုးမဲ့အင်တာနက်နှင့်ကေဘယ်လ်တီဗွီကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ကျောင်းသားများဒြပ်စင်ကြားမှလူတန်းစားရနိုင်အောင်ရာသီဥတုအထူးသဖြင့်ကြမ်းတမ်းသောအခါနေ့ရက်ကာလအဘို့, Dugan ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Wellesley ကောလိပ်ကျောင်းပရဝုဏ်၏ဓာတ်ပုံလှည့်လည်
Phi Beta ကို Kappa ဂုဏ်ပြု Society က
Princeton University ကဓာတ်ပုံလှည့်လည်
Pac 12 ညီလာခံ
2018 ခုနှစ် 8 အကောင်းဆုံးတင်းနစ်ရက်ကက်ကိုဝယ်ရန်
လေထု၏5Layers
အင်္ဂလိပ် 200 ဘုံ redundancy
အဆိုပါ 8 ခြေလက်အင်္ဂါ & ယောဂ၏4အမျိုးအစားများ
ဂျိုး Rogan - အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဆိုပါ Paso Doble Dance Learn
သစ်မာနှင့် Softwood သစ်ပင်များအကြားကွဲပြားခြားနားသွား
အဆိုပါအမှောင်အတွက်အဘယ်ကြောင့် Wintergreen အသက်ကယ် Spark: Triboluminescence
ဒေါက်တာ King ရဲ့ "ကျွန်မနေတဲ့အိပ်မက်ဖူး" မိန့်ခွန်းအပေါ်ပဟေဠိ
ဘယ်ကာစီနိုဂိမ်းအကောင်းဆုံး comp ဝေငှ?
Abstract ပန်းချီဆွဲပါ - တွးနှင့်အတူစတင်
Bootsy Collins က '' ဆယ်ပါးအကြီးမြတ်ဆုံး Hits
TPC Sawgrass ရုပ်ပုံများ: အဆိုပါအားကစားကွင်းသင်တန်းအမှတ်စဥ်
စာစီစာကုံးစာမေးပွဲများကိုရိုက်ယူခြင်းများအတွက် 10 သိကောင်းစရာများ
အရှိန်အဟုန်တက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Donald ဝုဒ်နှင့်လှုပ်ရှားသူစတိဗ် Biko ၏မရဏ